फ्रोआला: पूर्ण फिचर भएको WYSIWYG रिच टेक्स्ट एडिटरको साथ तपाईंको प्लेटफर्म बढाउनुहोस्। Martech Zone
यदि तपाईं कहिले प्लेटफर्मको विकासको सडकमा सुरू गर्नुभयो जहाँ तपाईंलाई पाठ सम्पादक आवश्यक पर्दछ जुन तपाईंले देख्नुहुन्छ-के-हो तपाईंले प्राप्त गर्नुहुन्छ (WYSISYG), तपाईंलाई थाहा छ यो कति गाह्रो हुन सक्छ। जब म ईमेल सेवा प्रदायकमा काम गर्दछु, सम्पादकको विकास गर्न र परीक्षण गर्न कार्यले उत्तरदायी, क्रस-क्लाइन्ट ईमेल एचटीएमएल विकासकर्तालाई पुनरावृत्ति र सही गर्न धेरै रिलीज लिए। यो सजिलो छैन।
एक पाठ सम्पादक ती ती मध्ये एक तत्व हो जुन तपाइँ प्लेटफर्ममा सम्मिलित गर्न चाहानुहुन्छ जसले कैद गरिएको सामग्रीलाई उल्लेखनीय रूपमा बृद्धि गर्दछ, तर महिना वा बर्षको विकासको आवश्यक पर्दैन। Froala सम्पादक तपाईको विकास टोलीका लागि सबैमा एकीकृत गर्न हल्का वजन, राम्रो संगठित, सुरक्षित, र सजिलो छ कि एक तेज प्रख्यात पाठ सम्पादक हो। लोकप्रिय फ्रेमवर्क.
फ्रोला सम्पादक डिजाइन सुविधाहरू
आधुनिक डिजाइन - एक राम्रो आधुनिक इन्टरफेस जुन प्रयोगकर्ताहरूले मात्र मन पराउँछन्।
रेटिना तैयार - अधिक विवरण, उत्तम सौंदर्यशास्त्र र तीव्र फन्टहरू।
वस्तु - पूर्वनिर्धारित वा गाढा विषयवस्तु प्रयोग गर्नुहोस्, वा LESS थिम फाईल प्रयोग गरेर आफ्नै विषयवस्तु सिर्जना गर्नुहोस्।
सहज इंटरफेस - फ्रोला रिच टेक्स्ट एडिटरले एक धेरै सहज इंटरफेस मार्फत पूर्ण प्रकार्य प्रदान गर्दछ जुन प्रयोगकर्ताहरूले प्रयोग गर्न प्राकृतिक पाउँनेछन्।
पपअप - नयाँ, अद्भुत प्रयोगकर्ता अनुभवको लागि स्टाइल पपअपहरू।
SVG आइकनहरू - इन-हाउसले SVG आइकनहरू बनाउँदछ, स्केलेबल भेक्टोरियल आइकनहरू जुन कुनै पनि आकारमा सुन्दर देखिन्छ।
अनुकूलन शैली - WYSIWYG HTML सम्पादक मात्र एक हो कि एक विशेष कस्टमाइजर उपकरण छ परिवर्तन गर्न र तपाइँले चाहानु भएको तरिका महसुस गर्न।
अनुकूलन उपकरण पट्टी - धेरै धेरै बटनहरू? सायद ठीक क्रममा छैन? तपाईंसँग प्रत्येक स्क्रीन आकारमा सम्पादकको उपकरणपट्टी प्रकार्यमा पूर्ण नियन्त्रण हुन्छ।
सबै तरीकाले अनुकूलन गर्नुहोस् - सबै चीजहरू अनुकूलित गर्न वा अनुकूलित गर्न सकिन्छ: बटनहरू, ड्रपडाउनहरू, पपअपहरू, आइकनहरू, सर्टकटहरू।
स्टिकी टुलबार - तपाईंको सम्पादन अनुभवलाई कम गर्न WYSIWYG सम्पादकको उपकरण पट्टी स्क्रीनको शीर्षमा रहनेछ जब तपाईं तल स्क्रोल गर्नुहुन्छ।
टूलबार अफसेट - रिच टेक्स्ट एडिटरको उपकरणपट्टीले तपाइँको वेबपृष्ठमा हेडरको साथ ओभरल्याप गर्नुपर्दैन, मात्र यसको लागि एक अफसेट सेट गर्नुहोस्।
तलको उपकरणपट्टी - सजिलैसँग WYSIWYG HTML सम्पादक उपकरणपट्टी स्थिति माथिबाट तल बदल्नुहोस्, जबकि स्टिकी टुलबार वा अफसेट प्रयोग गर्दा।
पूर्ण स्क्रीन - ठूलो मात्राको सामग्रीसँग डिलि गर्न ठूलो सम्पादन स्थान आवश्यक हुन्छ। पूर्णस्क्रिन बटनले सम्पूर्ण वेबपृष्ठ स्थानमा सम्पादन क्षेत्र विस्तार गर्दछ।
पूर्ण पृष्ठ - सम्पूर्ण HTML पृष्ठ लेखन र सम्पादन गर्न पनि सम्भव छ। ईमेलहरूको लागि सहयोगी हो, तर मात्र होइन, HTML, HEAD, BODY ट्यागहरू र DOCTYPE घोषणाको उपयोग अनुमति छ।
Iframe - WYSIWYG HTML सम्पादकको सामग्रीलाई iframe को प्रयोग गरेर बाँकी पृष्ठबाट पृथक गर्न सकिन्छ ताकि त्यहाँ कुनै शैली वा लिपि द्वन्द्व छैन।
Froala सम्पादक प्रदर्शन सुविधाहरू
फास्ट - आँखा झिम्काउनु भन्दा छ गुणा छिटो, धनी पाठ सम्पादक 40ms भन्दा कममा आरम्भ हुनेछ।
हल्का - यसको z० केबीको जीज्ड कोरसँग, तपाईं लोडिंग स्पीड गुमाए बिना तपाईंको अनुप्रयोगमा अद्भुत सम्पादन अनुभव ल्याउन सक्नुहुनेछ।
प्लगइन आधारित - मोड्युलर संरचना WYSIWYG HTML सम्पादक अधिक कुशल, बुझ्न सजिलो, विस्तार र मर्मत गर्न सजिलो बनाउँछ।
पृष्ठमा बहु सम्पादकहरू - एकै पृष्ठमा एक वा दश पाठ सम्पादकहरू? तपाईले कुनै फरक महसुस गर्नुहुने छैन, केवल क्लिकमा आरम्भ गर्न सेट गर्नुहोस्।
HTML5- फ्रोआला रिच टेक्स्ट एडिटर सम्मानका साथ निर्माण गरिएको छ र HTML standards मापदण्डको फाइदा लिदै।
CSS। - CSS using प्रयोग गर्नु भन्दा प्रयोगकर्ता अनुभव सुधार गर्ने कुन राम्रो तरीका हो? सूक्ष्म प्रभावहरूले सम्पादकलाई अझ ठूलो बनाउँदछ।
फ्रोला सम्पादक मोबाइल सुविधाहरू
एन्ड्रोइड र आईओएस - एन्ड्रोइड र आईओएस उपकरणहरू परिक्षण र समर्थित।
छवि रिसाइज - फ्रुलाला रिच टेक्स्ट एडिटर पहिलो WYSIWYG HTML सम्पादक हो जुन छवि रिसाइजको साथ छ जुन मोबाइल उपकरणहरूमा पनि काम गर्दछ।
भिडियो रिसाइज - भिडियोहरू प्ले भएको बेलामा पनि पुनःआकार परिवर्तन गर्नका लागि पहिलो। र निस्सन्देह, यसले मोबाइलमा पनि काम गर्दछ।
उत्तरदायी डिजाइन - तपाईंले सम्पादन गरिरहनु भएको सामग्री उत्तरदायी हुनेछ। तिनीहरूको WYSIWYG HTML सम्पादकले प्रतिशतको प्रयोग गरेर छवि रिसाइज ह्यान्डल गर्न सक्दछ।
स्क्रिन आकार द्वारा उपकरणपट्टी - एक धनी पाठ सम्पादक मा पहिलो पटक, उपकरण पट्टी प्रत्येक स्क्रीन आकार को लागी अनुकूलित गर्न सकिन्छ।
Froala सम्पादक SEO सुविधाहरू
HTML सफा गर्नुहोस् - फ्रोलाले एउटा एल्गोरिथ्म विकास गर्‍यो जुन स्वचालित रूपमा उनीहरूको रिच टेक्स्ट सम्पादकको HTML आउटपुट खाली गर्दछ। चिन्ता बिना लेख्नुहोस्, WYSIWYG HTML सम्पादकले एकदम सफा आउटपुट उत्पादन गर्दछ, खोज ईन्जिनले क्रल हुनको लागि पर्खदै।
छवि Alt ट्याग समर्थन - छवि विकल्प वैकल्पिक देखाइएको पाठ हो यदि ब्राउजरले छवि प्रदर्शन गर्न सक्दैन। यो खोज ईन्जिनहरूले प्रयोग गर्ने टेक्स्ट पनि हो, त्यसैले यसलाई बेवास्ता नगर्नुहोस्। वैकल्पिक पाठ सम्पादन पपअपमा सेट गर्न सकिन्छ।
लिंक शीर्षक ट्याग समर्थन - जहाँ लिंक शीर्षक प्रमुख एसईओ प्रभाव को रूप मा परिचित छैन, यसले प्रयोगकर्ताहरूलाई तपाइँको वेबसाइट को माध्यम बाट सजिलै नेभिगेट गर्न मद्दत गर्दछ। यति महत्वपूर्ण छैन, तर राम्रो छ। लिंक पपअपमा लिंक शीर्षक सेट गर्नुहोस्।
Froala सम्पादक सुरक्षा सुविधाहरू
Froala WYSIWYG HTML सम्पादक XSS आक्रमणको बिरूद्ध एक मजबूत रक्षा संयन्त्र छ। धेरै जसो केसहरूमा तपाईले यस बारे चिन्तित हुनुपर्दैन, तर हामी अझै सुझाव दिन्छौं कि तपाईले आफ्नो सर्वरमा थप जाँचहरू गर्नु पर्छ।
समर्थन सहित सबै HTML सुविधाहरू, सम्पादक 34 XNUMX विभिन्न भाषाहरूमा अनुवाद गरिएको छ, स्वत: पत्ता लगाउन RTL समर्थन छ, र हिज्जे जाँच।
Froala पनि एक छ WordPress प्लगइन तपाईंको WordPress साइटमा सम्पादक एकीकृत गर्न।
Froala अनलाइन HTML सम्पादक प्रयास गर्नुहोस् Froala डाउनलोड गर्नुहोस्
टैग: सम्पादकछिटो सम्पादकhtml सम्पादकरिच टेक्स्ट एडिटरपाठ सम्पादकWordPress सम्पादकwysiwygwysiwyg सम्पादक